Guinea oo guuto ciidan ah u diraysa Soomaaliya - BBC News Somali
Guinea oo guuto ciidan ah u diraysa Soomaaliya
Image caption Ciidamada dalka Guinea
Midowga Africa, ayaa maanta sheegtay in Guinea ay ilaa hal guuto oo ciidan ah ay u dirayso dalka Soomaaliya si ay ugu biiraan ciidamada nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya.
Waa ballanqaadkii ugu horeeyay, ee ka soo baxa shirka midowga Africa ee ka socda Kampala, Uganda oo la filayo in dhibaatada Soomaaliya uu xoogga saari doono.
Sida ay qortay wakaaladda Wararka ee Reuters, Soomaaliya waxay gashay halka ugu saraysa ee arrimaha looga hadlayo shirka Africa, oo ay ka soo qaybgalayaan in ka badan 30 madaxwayne, kadib markii wax aan ka badnayn laba todobaad ka hor ay mucaaradka Soomaaliya weerar bomb oo mataane ah ay ku qaadeen caasimadda Kampala ee dalka Uganda.
Guddoomiyaha Midowga Africa, Jean Ping, ayaa ku yiri weriyayaasha "maanta waxaan ballanqaad buuxa ka haysnaa dalka Guinea in uu dirayo hal guuto,". Wuxuu intaas ku daray in "guinea ay diyaar u tahay in ay si deg deg ah u dirto ciidamada".
Midowga Africa, waxaa hadda ka jooga Muqdisho ilaa 6100 askari oo ka socda dalka Uganda iyo Burundi. Waxaa la damacsanaa in ilaa 8000 ciidan gaaraya la geeyo Soomaaliya.
Dalalka IGAD, ayaa bishii hore ballanqaaday in ilaa laba kun ciidan gaaraya ay u diraan Soomaaliya, balse wali ma jiraan dalal ku dhawaaqay in ay dirayaan ciidankaas.
Ballanqaadyadaas, ayaa tirada ciidamada ee la gaynayo Soomaaliya ka dhigaysa mid ka badan sideed kun. Waxaana ay dhaafsiisan tahay tirada uu fasaxayo sharciga ay hadda ciidamada ku joogaan Soomaaliya.
Diblomaasiyiin u hadashay AU, ayaa u sheegay Reuters in sharciga AMISOM dib loogu eegi doono kulanka ka dhacaya Kampala, halkaas oo ay suurtagal tahay in xayiraadda dhinaca tirada ciidamada la qaadi doono.